Ucam, obere onyunyo onyunyo echekwara ma zoro ezo
Ucam, obere igwefoto echekwara echedoro echekwara >
Ucam bụ obere igwefoto sitere na ụlọ ọrụ IoTeX nke, na mgbakwunye na ịnye atụmatụ nlele kachasị ọhụrụ na ahịa, na-ekwe nkwa nzuzo na nchekwa site na ngọngọ na nzobe data.
Ihe ọ bụla kpatara anyị chọrọ ịwụnye igwefoto onyunyo n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs, otu ihe doro anya, ọ bụ na anyị achọghị ka e ledo anyị na nloghachi!
O di nwute, ulo oru ole na ole enweela ihe ojoo banyere igwefoto. N'ihi ya, ọtụtụ ndị anaghị achọ ịnweta otu ugbu a.
N'adịghị ka igwefoto ndị ọzọ, Ucam na-eji ngọngọ iji nye nchebe anyị nwere n'eziemkpa.
Ngọngọ na izo ya ezo iji gbochie hacking
Akụkụ bụ isi nke
Ucam igwefoto bụ na ọ na-eji ngọngọ iji nye nchekwa na nzuzo anyị chọrọ n'ezie. N'ụzọ bụ isi, ngọngọ bụ teknụzụ maka ịchekwa na mgbasa ozi na-ewere ụdị nke nchekwa data, mana nke anaghị adabere na etiti ọ bụla. Na mgbakwunye na ọsọ ya, ọ nwere uru nke ịnọ na nchekwa.
Na nkenke, Ucam na-eji teknụzụ a eme ihe ozugbo mgbe anyị na-ahazi igwefoto anyị site na iji ngwa mkpanaka. Emepụtara igodo mkpụrụ edemede 50 pụrụ iche maka onye ọrụ ọ bụla ma onweghị onye nwere ike ijikọ igwefoto anyị na-enweghị ya. detuo, ọbụnadị ụlọ ọrụ IoTeX.
N'adịghị ka sistemụ igwefoto ndị ọzọ, ịkwesighi ịmepụta akaụntụ, nke a agaghị ekwe omume ịbanye!
Banyere vidio ndị e dekọrọ, a na-ezoro ezo na njedebe na-eme, nke na-eme ka ha ghara ịbịaru ha na-enweghị njirimara ngọngọ anyị akpọrọ n'elu. ngwa dị ka nke a, ị ga-ahọrọ iji PIN nke ahọpụtara tupu oge a ma ọ bụ iji usoro biometric (akara mkpịsị aka, njirimara ihu, wdg).
Nchịkọta nke ihe anyị nwere ike ịhụ na ngwaọrụ mkpanaka anyị jikọtara na Ucam anyị. Ihe ndị kachasị ọhụrụ na ahịa
Ekele maka ngwa dakọtara, anyị na-achịkwa ihe niile anyị jidere, anyị na-ahọrọ idebe ozi anyị na nzuzo, kesara ya na ndị nọ anyị nso ma ọ bụ nye ikike maka ndị na-enye ọrụ. Igwefoto igwefoto ejiri mara ihe nlere anya na ahia onyunyo dika:
Ihe ezoro ezo 1080p HD vidiyo site na Ucam na ngwaọrụ mkpanakanke anyị họọrọ.
Ihe nrịgo ogo 360 nke gụnyere ọnọdụ pan, ikike ịgbatị na mbugharị site n'ebe dị anya.
Nchọpụta mmegharị nke nwere ike ịkpalite oti mkpu na ndekọ. Ọhụhụ abalị akpaghị aka, nke na-enye ohere ọhụhụ ruo ụkwụ 36.
audiozọ okwu abụọ ga-eme ka anyị gwa onye ọ bụla nọ n'ụlọ.
Banyere ogo igwefoto ahụ, anyị Karịsịa dị ka obere ya, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe bara uru ịzobe n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs.
Ihe niile dị mfe iji hazie ngwa ahụ, nke dịkwa na French yana dakọtara na iOS na gam akporo , nke mere na ọbụlagodi ịbụ onye mbido, anyị na-eme nke ọma.
Nanị ihu ala bụ na agbanyeghị na
nwere ike gbaa ogo 360 ma chọpụta agagharị, ọ gaghị eso onye na-agafe n'ihu na-akpaghị aka nke lens.
Anyị ga-eji aka anyị bugharịa yaigwefoto, ma ị naghị enwe njikọ na ngwa ahụ n'oge niile n'ụbọchị.
Banyere ọnụahịa ahụ, igwefoto na-ere ihe dị ka $ 75 nke ị ga-agbakwunye ụgwọ mbata nke ihe dị ka iri na ise dollars.
Banyere oghere ndekọ, Ucam na-enye anyị ikike awa 3 n'efu kwa 10 nkeji oge na igwe ojii ha. Ma ọ bụghị ya, ị ga-ahọrọ atụmatụ na US $ 20 kwa afọ maka nke a na-akparaghị okè na etiti vidiyo nke sekọnd 20.
can nwekwara ike ịhọrọ ịghara iji ọrụ nchekwa ha ma chekwaa ihe niile dị n'akụkụ anyị, na-eji microSD kaadị, mana o doro anya na nke ahụ pụtara obere ohere nchekwa.
Mụtakwuo maka igwefoto onyunyo Ucam nke IoTeX
Nweta igwefoto Ucam na Amazon.ca
Ogidi a nwere njikọ njikọta.
Nyochaa ụra gị na onye na-akwado olu olu Google Nest Hub nke abụọ
2021-03-31 20:19:15 | Lọ
Nyochaa ụra gị na Google Nest Hub nke na-enyere enyemaka olu nke abụọ Google na-ebido ọgbọ nke abụọ nke onye enyemaka olu ya na ngosi: Nest Hub. Na mgbakwunye na ịwelite ogo nke ọkà okwu ya site na 50%, nnukwu ihe ọhụụ nke Nest Hub a bụ na ọ nwere ike soro ma nyochaa ụra anyị. Ihe omume nke na - agh...
Floss rụọ ọrụ nke ọma karịa mgbe ọ bụla site na Cordless HydroPulser
2021-03-31 20:18:07 | Lọ
Flolọ na-arụ ọrụ nke ọma karịa karịa na HydroPulser na-enweghị eriri Ga-ezute Waterpik Cordless HydroPulser, gadget nke na-anọchi floss dental na jet nke mmiri iji wepu ihe ncheta ọzọ ma melite ahụike chịngọm. Portable and cordless, the gadget is zuru ezu maka obere ime ụlọ ịwụ ma ọ bụ ka a na-agagh...
Echo Gosi 10: onye enyemaka olu na-esote anyị n’azụ ụlọ
2021-03-30 20:04:37 | Lọ
HomeEcho Gosi 10: onye enyemaka olu nke na-esote anyị na gburugburu ụlọ Amazon amalitela onye inyeaka olu ọhụrụ na ihuenyo 10,1, Echo Show 10. Na mgbakwunye na inyere anyị aka na ọrụ anyị, arịrịọ anyị kwa ụbọchị na ngwaọrụ akpaaka ụlọ anyị, onye enyemaka ahụ na-apụta maka ike ya ịgbaso anyị na njem ...